बुबाको काखमा बसिरहेकी यी बालिका बलिउडकी दबंग नायिका हुन् : तपाईले चिन्नु भयो त ? – Annapurna Post News
बुबाको काखमा बसिरहेकी यी बालिका बलिउडकी दबंग नायिका हुन् : तपाईले चिन्नु भयो त ?
June 21, 2022 sujaLeaveaComment on बुबाको काखमा बसिरहेकी यी बालिका बलिउडकी दबंग नायिका हुन् : तपाईले चिन्नु भयो त ?
काठमाडौं । फ्यानहरू सधैं आफ्नो स्टारहरूको जीवनबारे जान्न उत्सुक हुन्छन् ।बाल्यकालको तस्वीर होस् वा परिवार वा साथीभाइसँग बिताएका पलहरू, यसबारे उनीहरु जानकारी लिन मन पराउँछन् ।
जब यी सबै तस्वीर वा भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा आउँछन्, तब फ्यानहरू सेयर गर्न थाल्छन् । अहिले एक बलिउड अभिनेत्रीको बाल्यकालको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ ।
उनको पुरानो तस्बिर देखेर धेरैले चिन्न सकेनन् । फादर्स डेको (१९ जुन) मा बुबालाई शुभकामना दिन अभिनेत्री आफैंले बाल्यकालको यो तस्वीर पोस्ट गरेकी थिइन् ।यस तस्वीरमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ एक बालिका आफ्नो बुबाको काखमा आफ्नो मुखमा औंला राखेर बसिरहेकी छिन् । उनीसँगै उनकी आमा पनि छिन्, जसको काखमा अर्को सानो बच्चा पनि देखिन्छ ।
ती बालिका क्यामेरातिर हेरिरहेकी छिन्, उनका आमाबुवा उनलाई हेरेर मुस्कुराउँदै छन् । यी बलिउड अभिनेत्रीलाई अझै पनि चिन्न सक्नु भएको छैन भने हामी तपाईलाई एउटा सानो हिन्ट दिन्छौं ।
उनी आफ्नो मनको कुरा निर्दोष ढंगले बोल्ने गरेका कारण पनि चर्चित छिन् । यससँगै उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सक्रिय छिन् ।यदि तपाईंले अहिलेसम्म यी अभिनेत्रीलाई चिन्नुभएको छैन भने, हामी तपाईंलाई बताउछौं कि बुबाको काखमा मुखमा औंला हालेर बसेकी यी बालिका अरू कोही नभएर बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री स्वरा भास्कर हुन् ।
बाल्यकालको यो तस्वीर उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा सेयर गरेकी छिन् । तस्वीर सेयर गर्दै उनले यसको क्याप्शनमा लेखेका छन्, ‘ह्याप्पी फादर्स डे ड्याड ।
तपाईंले बहादुरी पुरस्कार पाउनु पर्छ, किनभने तपाईंले यी दुई सबैभन्दा बदमाश बच्चाहरूलाई मात्र हुर्काउनुभएन, तिनीहरूको सामना पनि गर्नुभएको छ ।’ स्वरा भास्करको यो तस्वीरलाई उनका फ्यानहरूले मन पराइरहेका छन् ।
लिभर सिरोसिस के हो र यो किन हुन्छ ?
दुर्व्यवहारको मुद्धा हाल्ने चर्चित अभिनेत्रीमाथी अदालतको उल्टो चार्ज, १५ मिलियन तिर्न आदेश
April 22, 2022 suja
अनिल कपुरसँग बलिउड फिल्म एनिमलमा भिलेनको भुमिकामा देखिदै विपिन कार्की